Xigasho.net Madaxweyne Farmaajo oo Kulamo Wadatashi ah La Qaadanaya Bulshada Gobolka Mudug - Xigasho.net
Madaxweyne Farmaajo oo Kulamo Wadatashi ah La Qaadanaya Bulshada Gobolka Mudug
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalkiisa nabadda ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa sabtidii shalay soo gaaray magaalada Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug.
Soodhaweynta wafdiga Madaxweynaha ee Galkacyo waxaa ka qeyb qaatay Kumanaan shacab oo isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada iyaga oo ruxayay calanka Jamhuuriyadda, kuna dhawaaqayay ereyo ay ku muujinayaan dareenka faraxadeed ee ay u hayaan booqashada Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay mudada uu joogo magaalada Gaalkacyo in uu dardar gelin doono dadaallada dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalada oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay bilihii u dambeeyay wax badan ka qabatay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuusan Gaalkacyo ka tagi doonin inta ay labo dhinac u kala qeybsantahay.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ku sugan Magaalada Gaalkacyo oo ay wehlinayaan mas`uuliyiinta maamulka Galmudug,iyo xubno ka tirsan Dowlada soomaliya ayaa maanta oo Axad ah waxaa la filayaa in ay furaan kulamo dib u heshiisiin ah oo ku saabsan xaaladda gobolka Mudug.